बैंकमा महिलाहरूकाे नाममा कति खाता छन्? – Hotpati Media
बैंकमा महिलाहरूकाे नाममा कति खाता छन्?
३ कार्तिक २०७६, आईतवार १९:३६ मा प्रकाशित (9 महिना अघि) अनुमानित पढ्ने समय : २ मिनेट
काठमाडाैं-नेपालमा कूल २ करोड ९० लाख हाराहारी जनसंख्या छ । जसमा १ करोड ७७ लाख ९० हजार ७८३ जना नेपालीको नाममा बैंकमा सक्रिय निक्षेप खाता खोलिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
नेपालमा वित्तीय पहुँच ६०.१ पुगेको तथ्यांक राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको छ । जसमध्ये ४१.२२ प्रतिश महिला र ५८.७७ प्रतिशत पुरुषमा वित्तीय पहुँच पुगेको देखिएको छ । यसरी हेर्दा पछिल्लो समय वित्तीय समावेशितामा अपेक्षित प्रगति हुर्दै गएको देखिन्छ ।
बैंकमा खोलिएका सक्रिय खाता मध्ये १ करोड ४ लाख ५६ हजार ६४७ वटा खाता पुरुष नामको हो भने ७३ लाख ३४ हजार १३६ वटा खाता महिलाको नामको हो ।
महिलाको वित्तीय पहूँच प्रदेशगत रुपमा पनि उल्लेख्य रुपमा रहेको छ । प्रदेशगत रुपमा सबैभन्दा धेरै प्रदेश नम्बर ३ मा र सबै भन्दा थोरै प्रदेश नम्बर ६ कर्णाली प्रदेशका जनताको नाममा बैंक खाता रहेको छ । प्रदेश ३ मा ५६ लाख १३ हजार ८४६ जनसंख्या रहेको छ । जसमध्ये २६ लाख ३० हजार ९८२ वटा विभिन्न बैंकहरुमा महिलाहरुको सक्रिय खाताहरु रहेका छन् ।
यस्तै सबैभन्दा कम जनसंख्या तथा कम बैंकमा खाता खोलिएको कर्णाली प्रदेशमा विभिन्न बैंकहरुमा १५ लाख ३९ हजार ४०९ मध्ये २ लाख ७० हजार १०१ वटा सक्रिय खाता महिलाहरुको नाममा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।